Dastabej » जो १० लाख भारु तिरेर महिला बनिन्
जो १० लाख भारु तिरेर महिला बनिन् – Dastabej
जो १० लाख भारु तिरेर महिला बनिन्
कोहलपुर नगरपालिका ४ की २३ वर्षीया जेसिका खडकाले भने बेलायती सांसदको नजिरलाई पनि तोडेकी छन् । उनी जीवनबाट जेसिका बनेकी छन् । तर जेसिका बन्न उनलाई कम्ति पैसा खर्च गर्नु परेन । थाईलेन्ड पुगेर १० लाख भारु १६ लाख नेपालीमा उनले जेन्डर परिवर्तन गरेकी छन् ।
नेपालगन्ज— बेलायती सांसद बारे संसारभरी प्रख्यात भनाई छ—उनीहरुले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउँन सक्दैनन् । बाँकी सबै कुरा सम्भव छ । तर कोहलपुर नगरपालिका ४ की २३ वर्षीया जेसिका खडकाले भने बेलायती सांसदको नजिरलाई पनि तोडेकी छन् । उनी जीवनबाट जेसिका बनेकी छन् । तर जेसिका बन्न उनलाई कम्ति पैसा खर्च गर्नु परेन । थाईलेन्ड पुगेर उनले १० लाख भारु ९१६ लाख नेपाली० मा उनले जेन्डर परिवर्तन गरेकी छन् । परिवारले साथ दिए र सम्भव भयो जेसिका बन्न । केही संस्थाले पनि उनलाई सघाए ।
यो अवस्थासम्म आईपुग्न कम्ति मानसिक तनाव झेल्नु परेको छैन । तीन वर्षअघि उनी जीवन खडका भनेर चिनिन्थे । भित्रि मनले महिला बन्ने रहर । तर सामाजिक बाध्यता थियो । भित्रि इच्छा दबाएरै बसे । तर दबाएर कतिन्जेल बस्न सक्ने रु ‘हाल म जेसिका खडकाले चिनिन् थालेकी छु,’ कोहलपुर नगरपालिका ४ की २२ वर्षीया सुन्दरी खुलिन । सानै छँदा बुबा÷आमा बिते । माया गर्ने भेटिएनन् । बिद्यालय जान्थे । शारिरीक स्वभाव महिलाको जस्तो थियो । साथीभाईहरुले मजाकमा उडाउँथे । उनको आत्माबल कमजोर बन्थ्यो । तर बिद्यालयमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा भने चर्चा उनकै थियो ।
कारण— डान्सर । हरेक गीतमा नाच्थिन । दर्शकहरु नाचको प्रशंसा गर्थे । केटी बनेर नाच्न पाउँदा उनी हुरुक्कै हुन्थिन । ‘सानै उमेरदेखि मेरो केटी बन्ने चाहना थियो । सांस्कृतिक कार्यक्रमले त्यो जुराउँथ्यो,’ उनले मनको बहा पोखिन,‘समान्य अवस्थामा महिला बनेर हिड्न समस्या हुन्थ्यो । तर सांस्कृतिक कार्यक्रममा भने महिला बन्न छुट थियो ।’ कलाले लैगिक विभेद स्वीकार्दैन ।
जान्ने भएदेखि जेसिका बनेर नखुल्दासम्म लामो समय उनी उकुसमुकुसमै बिताईन । इच्छा दबाएर बाँचिन । अन्तरआत्माले महिला बन्ने सपना पूरा नहुँदा एक्लै रुन्थिन । सामाजिक परिबेशले बाँधेको थियो । एक मनले महिला बनेर स्वछन्द भएर हिड्न चाहन्थिन । तर सामाजले गर्ने ब्यवहारले आफूलाई रोक्थिन । ‘एक्लै घरमा भएका बेला रुन्थे । आफूले आफैलाई धिकार्थे,’ जेसिकाले भनिन्,‘नाच्नु र गाउनु मेरा बाल्यकालदेखिको रहरले यहाँसम्म ल्याई पु¥यो ।’ तेस्रो लिगी होईन । उनी आफूलाई महिला भन्न बढी रुचाउँछिन ।
जेसिका जति नाच्नमा पोख्त छिन त्यही धेरै गीत गाउँन पनि । अनौठो के भने उनी महिला र पुरुष दुबैको आवाजमा गीत गाउँछिन् । मेला महोत्सवमा उनको माग बढ्न थालेको छ । डान्स, महिला—पुरुषको स्वरमा गीत गाउन सक्नु उनको फरक क्षमता हो । हिन्दी, नेपाली गीतहरु ब्यवसायिक गायकजस्तै मजाले गाउँछिन । ‘भगवानले मलाई फरक क्षमता दिएको छ । महिला पुरुष दुबैको स्वरमा गीत गाउँन सक्छु,’ महिला आवाजमै उनले सुनाईन,‘हाल मेरो माग बढ्न थालेको छ । गीतका लागि पनि अफर आईरहेका छन् ।’ सुरुमा उनले थारु भाषाको गीत गाउने अवसर पाएका थिए । उक्त गीत रुचाइएपछि माग बढेको हो । राजधानी काठमाडौंबाट पनि गीतका लागि अवसर आउन थालेकोमा उनी निकै खुसी छन् । ‘पहिले जतिनै दुःख गरेपनि हाल आएर मेरो सपना पूरा हुन थालेको छ,’ उनले भनिन्,‘अवसरहरु पाउन थालेको छु । आफूलाई त्यसरी नै तयारी पनि गरिरहेको छु ।’
तेस्रो लिगीहरुको हकहितमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको सहयोग पाएपछि उनलाई खुल्न सहज भएको हो । ‘जन्म दिने बुबाआमाले जीवन नाम दिए । कर्मले जेसिका,’ उनले भनिन् । जेसिकको संघर्षपछिको सफलताको प्रचार हुँदै गएपछि सन्चार माध्यमहरुले अन्र्तवार्ता र कुराकानीका लागि बोलाउन थालेका छन् । टेलीभिजन र रेडियोहरुमा उनले संघर्षपछिको सफलता बारे बोलिरहेकी छन् । ‘पहिले अनेकथरी भन्नेहरु प्रसंशा गर्न थालेका छन्,’ उनले भने,‘जेसिकाका नामले चर्चामा आउन सकेकोमा निकै खुसी छु । तर समाजले गर्ने विभेदले भने उनी दिक्क छिन । समाजले हेर्ने देष्टिकोणमा परिवर्तन नहुँदा उनी दुखी छन् ।
१ मंसिर २०७७, सोमबार १०:०० प्रकाशित
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन विजयी
महामारी नियन्त्रण गर्न समिति
कोरोनाबाट ५ को मृत्यु, संक्रमितको संख्या ९० हजार नाध्यो
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनः बाँकेका शर्मासहित लुम्बिनीमा गठबन्धन विजयी
३.	बाँके प्रहरीद्धारा खजुरा बलात्कार घटना सार्वजनिक
४.	चार दिनदेखि बाघले गरेन राँगाको शिकार, नियन्त्रणको प्रयास भयो बेकार
५.	खजुरा घुम्न गएकी १८ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार
६.	ब्रेकिङ न्युजः बाघलाई खुर्पाले प्रहार गरी महिला बाँच्न सफल (भिडियो)